X.Mooshinka ka wada Jawaari oo raadinaya wax ka bedelka qodob ka mid ah Dastuurka – idalenews.com
Magaalada Muqdisho wali waxaa ka socda Kulamada ay yeelanayaan Xildhibaanada Mooshinka ka gudbiyay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaliya Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) oo ay ku doonayaan iney ku soo bandhigaan Awoodooda, Waxaana kulamadaas ku baxaya Dhaqaale fara badan.
Xildhibaanada mooshinka wada ayaa qorsheynaya inay ku kala baxaan Guddoomiye Jawaari, inta aan la tagin Baarlamaanka, si culeys iyo cadaadis ugu saaraan inuu is casilo, iyadoo kulamadooda ay yihiin kuwo aan joogsi laheyn.
Inkastoo Guddoomiye Jawaari uu ogolaaday in Mooshinka la horkeeno Baarlamaanka, Codna loo qaado ayaa hadana waxaa durbadiiba soo ifbaxay Khilaaf ka dhashay qaabka ay noqoneyso Cod uqaadista Mooshinka.
Xildhibaanada Mooshinka keenay ayaa doonaya in Cod gacan taag ah loogu codeeyo Mooshinka, Waloow Dastuurka uu qabo in Codeynta ay noqoneyso mid qarsoodi, sida uu qeexayo Qodob kamid ah Dastuurka KMG ah ee Dalka.
Xildhibaan Maxamuud C/llaahi Axmed (Abuukaate) oo kamid ah Xildhibaanada sida weyn u difaacaya Guddoomiye Jawaari ayaa Facebookiisa ku soo qoray in Xukuumadda ay dadaal ku bixineyso in Codeynta gacan taag noqoto si ay u kala ogaadaan Xildhibaanada u codeeyay iyo kuwa aan u codeyn.
Abuukaate ayaa qaba iney jiraan Xildhibaano Wasiiro u badan oo u baqanaya in Xilka laga qaado, balse aaney ka go’neyn ridista Jawaari, Kuwaasoo hadii ay Codeynta noqoto qarsoodi Codkooda ku difaacaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jawaari.
Si Kastaba, Wali si dhab ah looma oga xiliga rasmi ahaan Baarlamaanka la horgeynayo Mooshika si Codka Kalsoonida loogu qaado, Inakastoo Gudoomiye Jawaari Sheegay iney heystaan 10 Maalin Xildhibaanada Mooshinka keenay taasoo ka bilaabaneysa Markii mooshinka ay gudbiyeen oo ku aadan 14-kii Bishan.
Hadii taas la raaco Waxey ku aadeysaa 24-ka Bishan oo ku asteysan maalinimada Sabtida ee Soo socoto oo Baarlamaanka ka fariisan doono Mooshinkan hadaan qorshaha waxba iska badalin.
M.Gobolka Banaadir oo dib u furay waddo muhiim aheyd oo dhagxaan lagu gooyay